Raysal wasaaraha Kanada oo uga digay qaxootiga in dalka kusoo galaan si sharci daro ah - Horn Future
Raysal wasaaraha Kanada oo uga digay qaxootiga in dalka kusoo galaan si sharci daro ah
Montreal (Horn Future)-Raysal wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa uga digay qaxootiga inay dalka ku soo galaan si aanan nidaamsanayn,isaga oo sheegay in aynan wax fursad ah ku laheyn sidaas ,waxana uu si dadban u sheegay in sharciyo adag oo ka dhan ah lagu soo roggi doono sida ay sheegtay warbaahintu.
Justin Trudeau ayaa mar uu warbaahinta kula hadlay magaaladda Montreal kadib markii u la kulmay raysal wasaaraha Irland ku yidhi”Kanada waa bulsho furan oo soo dhaweyeeysa kuwa kale … laakiin ii oggollaada inaan cadeeyo inaan sidoo kale aan nahay waddan sharcigu na maamulo, galitaanka hab aanan sharci ahayn fursad ma’ah”.
Waxa tirakoobyada xukuumaddu ay soo saartay toddobaadkii lasoo dhaafay ay muujiyeen in tirada qaxootiga sida sharci-daradda ah uga soo gudbay soohdinta Kanada ee ka yimiday dhinaca Maraykanka ay noqotay in ka badan saddex-laab bishii July.
Xukuumadda federaalka ayaa sheegtay in in ka badan 3,100 qof ay si sharci daro ah uga soo gudbeen soohdinta bishii July si ay u codsadaan magangalyo, waana la xidhay, marka la barbar dhigo oo tiradani ay ahayd 884 bishii June.
Waxa ugu yaraan dadkan dhammaan ay tageen gobolka Quebec ee dadkiisu ku hadlo afka Fransiiska kuwaas oo inta badan ka soo jeeda dalka Haiti oo kasoo firxaday dalka Maraykanka oo ay ka cabsi qabeen inuu saameeyo ololaha socdaalka ee madaxweynaha Donald Trump,iyada oo qulqulka dadkan ay dhaleeceeyeen siyaasiyiinta macaaradka iyo kooxaha ka soo horjeeda qaxootiga ee gobolkan.
« The Failing Trump Presidency	» Markab dagaal oo Maraykan ah oo jiidhay markab shidaal iyo 10 bad-mareeno oo la laayahay